China Silicone akara washer na gasket Manufacture na Factory | Chengda
Ihe nkedo nke silikone na nkpuchi
Silicone na Rubber gaskets bụ n'ibu akàrà na-egbochi ntapu n'etiti iche iche mkpụrụ ngalaba. A na-ebipụ gaskets roba site na mpempe akwụkwọ roba ma ọ bụ ịpị akpụ. Igwe flange a na - ejikarị eme ihe na ọkpọ mmiri, spraying, ụgbọala, cylinders, nfuli, pipeline kemịkal, ọmarịcha, akụrụngwa, biarin, valves, ibo ụzọ na windo, ngwa eletriki, rollers, wdg.
Emeputa Dongguan Chengda Silicone & Rubber Technology Co., ltd.
Ndebanye aha Dongguan, Guangdong
Ihe onwunwe Silicone, nri ọkwa silicone, Ire ọkụ retardant silicone, conductive silicone ihe onwunwe, High okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ silicone ihe onwunwe, ọgwụ na ahụ ike ọkwa silicone, EPDM, NBR wdg
Main ngwaahịa o-mgbanaka, gasket, grommet, tube, mmiri iko, akara, wdg
Ngwa igwe, akụrụngwa, gburugburu ebe obibi, ọgwụ, ngwuputa, mmanụ ala, ụgbọala, wdg.
Okwu Mmalite nke Ihe Dị Iche Iche:
Njirimara arụmọrụ: MVO silicon bụ ihe na-adịghị egbu egbu, ezigbo mmebi ahụ, mmekorita dị ala, nguzogide magburu onwe ya na ikpo ọkụ, ụzarị ultraviolet, na ogidi ozone
Ọnọdụ ọrụ: -70 ℃ -220 ℃
Okwute siri ike: 25-90 degrees Shore
Ihe eji eme: Silicone roba ka eji eme ihe eji esi nri, ihe eji egwuri egwu, obere oche, na ụlọ ọrụ nzacha. Ebe ọ bụ na roba silicone nwere ume ike dị ala ma na-ebu mgbochi, enweghị ike iji ya rụọ ọrụ na-achọsi ike.
Njirimara arụmọrụ: Nitrile roba nwere nguzogide mmanụ dị mma, nkwụsị abrasion, nkwụsị mgbaze, nrụgide mmanụ dị elu, wdg, ma ọ gaghị adabara ihe mgbaze polar, dị ka ketones, ozone, na nitro hydrocarbons.
Na-arụ ọrụ okpomọkụ: -40 ℃ -120 ℃
Okwute siri ike: 40-90 degrees Shore
Ihe eji eme ihe: nke a na - ejikarị arụpụta gaskets dị iche iche na - eguzogide mmanụ, akàrà na hoses, wdg.
Arụ ọrụ: A na-ejikarị akwara roba fluorine maka akụrụngwa akụrụngwa chọrọ nguzogide okpomọkụ dị elu, mgbasa ozi kemịkal dị iche iche, na agụụ. Fluorine roba na-eguzogide ọgwụ siri ike na ntọala na-adịghị ike ma na-eguzogide ọgwụ mmanụ na abụba.
Arụ ọrụ okpomọkụ: -15 ℃ -230 ℃ maka static akara ma ọ bụ ozugbo akara, ọ nwere ike idi okpomọkụ nke 250 ℃
Okwute siri ike: 52-92 degrees Shore
Ihe eji eme ihe: nke a na-ejikarị arụ ọrụ, kemịkalụ, ike ụgbọ ala, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na gburugburu ebe ọrụ na-eguzogide oke okpomọkụ, kemịkal kemịkal, na mmanụ
Ndụ ọrụ nke mgbanaka roba EPDM dị ogologo karịa nke mgbanaka roba nkịtị. Ndụ ọrụ ọrụ nkịtị nke mgbanaka akara roba EPDM bụ afọ 110, nke dị iche na ndụ ndụ ọrụ nkịtị nke mgbanaka rọba eji mee ugbu a.
N'okpuru otu ọnọdụ ọrụ ọrụ (ya bụ, omimi e liri ya bụ 0.5-3.0m, na ọnọdụ ihu igwe dị 18 ℃ - 22 ℃), ndụ ndụ ọrụ nkịtị nke mgbanaka akara EPDM bụ afọ 110, mgbanaka akara EPDM nwere ike dakọtara ndụ ọrụ nke nodular graphite pipe si 70 afọ ruo 100 afọ, nke nwere ike hụ na nchekwa nchekwa nke netwọk pipeline.
Nke gara aga: Aka uwe mkpuchi Silicone
Osote: Ahaziri silicone echebe ikpe na mkpuchi
Omenala Silicone ma ọ bụ Rubber Products maka Electric ...
Ahaziri silicone echebe ikpe na mkpuchi
ODM na OEM silicone roba ngwaahịa
Conductive silicone roba ngwaahịa, conductive ...
Omenala karịrị Silicone na Ngwaahịa Rubber